Dowladda Federaalka Soomaaliya oo Heshiis dhex-dhigtay Maamuladii Baydhabo lagu dhisay (SAWIRRO) |
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo Heshiis dhex-dhigtay Maamuladii Baydhabo lagu dhisay (SAWIRRO)
Madaxda dowladda Somalia ayaa sheegay inay heshiis dhexdhigeen maamulladii looga dhawaaqay magaalada Baydhabo, iyadoo ay heshiiskaas goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha Somalia, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra’iisul wasaaraha.
Labada maamul ee saddexda gobol iyo lixda gobol oo uu u dhexeeyay khilaaf aad u weyn ayaa waxay xubnaha dowladda ka tirsan ee heshiiskan goobjoogga ka ahaa waxay sheegeen in dadaallo badan ay dowladdu ku bixisay sidii la isugu keeni lahaa labadan maamul loona heshiisiin lahaa.
Kulanka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socda beesha calaamka, iyadoo labada dhinac ay heshiiskan u kala saxiixeen C/fataax Geeseey oo ka socday maamulka lixda gobol laakiin uu xilka ka qaaday Madoobe Nuunoow iyo madaxweynaha maamulka saddex gobol, Maxamed Xaaji C/nuur (Mad-deer).
Qodobbada heshiiska waxaa warbaahinta u akhriyay afhayeenka xukuumadda, Ridwaan Xaaji C/weli, kuwaasoo ka koobnaa 11-qodob oo kala ah:
1. Labadan maamul ee saddexda iyo lixda waxay isku waafaqeen inay dhistaan hal maamul oo loogu yeeri doono maamulka Koonfur-galbeed ee Soomaaliya oo ka kooban gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose.
2. Xukuumadda Somalia oo kaashanaysa beesha caalamka waxay xaqiijinaysaa in dhammaan beelaha Soomaaliyeed dega gobolladan Jubbooyinka iyo Gedo ay si cadaalad ah u wadaagaan maamulka.
3. Xukuumadda Soomaaliya waxay xaqiijinaysaa in dhammaan beelaha dega gobollada Koonfur-galbeed inay si cadaalad ah u wadaagaan maamulka Koonfur-galbeed.
4. Marka ay habboonaato, xukuumaddu waxay fududeyn doontaa wada-tashi dhex-mara maamulka KMG ah ee Jubba iyo maamulka KMG ah ee Koonfur-galbeed si ay u wadaagaan danaha labada dhinac quseeya.
5. Labada dhinac waxay ku heshiiyeen in la dhiso guddi ka kooban 13-xubnood, guddigaas oo dhinac walba uu ka imaan doono min shan xubnood halka saddex xubnood ay ka imaan doonaan dhinaca dowladda Soomaaliya laguna soo dhiso muddo toban maalmood ah, kaddib marka la saxiixo heshiiskan. Guddigu waxay soo diyaarinayaan kuna heshiinayaan habka iyo wadiiqada loo marayo dhismaha maamulka KMG ah ee Koonfur-galbeed.
6. Xukuumadda KMG ah ee Soomaaliya oo kaashanaysa beesha caalamka waxay xaqiijinaysaa wixii looga baahan yahay iyo xaqiijinta dhismaha maamulkan KMG ah.
7. Labada dhinac waxay isku waafaqeen dhameystirka geeddi-socodka lagu soo dhisayo maamulka KMG ah ee Koonfur-galbeed muddo 30-maalmood gudahood ah, kaddib marka heshiiska la saxiixo.
8. Xukuumadda Soomaaliya waxay xaqiijinaysaa in dhisidda maamulka KMG ah loo maro hannaan ku dhisan nabad iyo xasillooni lagana fogaado wixii halis gelin kara nabadda iyo amniga.
9. Xukuumadda Federaalka Somalia waxay ku dadaali doontaa sii wadidda wadatashiga hoggaamiyeyaasha bulshada, sida odayaasha dhaqan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan si loo xaqiijiyo meel-marinta & xal u helidda howlaha dhiman iyadoo loo marayo hab wadatashi ah oo loo dhan yahay.
10. Beesha caalamka waxaa laga codsanayaa inay taageeraan geeddi-socodka iyo furlinta heshiiskan muhiimka ah iyo in laga qaado tallaabo ku habboon oo lid ku ah ruuxii ka horyimaada ama carqaladeeya geeddi-socodka nabadda dalka.
11. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa mas’uul ka ah meel-marinta iyo taabbo-gelinta heshiiskan.
Dhanka kale, maamulka lixda gobol ee Koonfur-galbeed Somalia ayaa kasoo horjeestay heshiiskan, iyagoo ku tilmaamay mid lagu carqaladyenayo maamulka ay dhiseen oo matala shacabka ku nool lixda gobol oo ay ka mid yihiin saddexda gobol ee ay dowladdu aqoonsatay maanta. order Viagra soft FRUIT online cheap, dapoxetine online.